Vlad ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိဟာ Impaler / Vlad III ကို Dracula
Vlad III ကို Wallachia ခေတ်သစ်ရိုမေးနီးယားအတွင်းတစ်ဥရောပအရှေ့ခွင့်တစ်ဆယ်ငါးရာစုအုပ်စိုးသောမင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ Vlad ထိုကဲ့သို့သော impalement အဖြစ်သူ၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာပြစ်ဒဏ်များအတွက်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဖြစ်လာခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်လည်းစစ်တိုက်ခြင်းငှါသူ၏ကြိုးစားမှုအဘို့အချို့တို့ကကြီးမှူးမတ် မွတ်စလင်အော်တိုမန်ခေတ် Vlad ခရစ်ယာန်တပ်ဖွဲ့တွေဆန့်ကျင်မှသာအများအားဖြင့်အောငျမွငျခဲ့သော်လည်း။ 1448, 1456 - - 62, 1476 - သူသုံးကွိမျအပေါ်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ခေတ်မီခေတ်အတွက်ဝတ္ထုမှလင့်များကျေးဇူးတင်အသစ်တစ်ခုကျော်ကြားမှုကြုံတွေ့ Dracula ။
Vlad အဆိုပါ Impaler ၏လူငယ်: Wallachia အတွက် Chaos
Vlad II ကို Dracule ၏မိသားစုသို့ 31 - Vlad 1429 အကြားမွေးဖွားခဲ့သည်။ ဤသည်မင်းသား encroaching ကနေခရစ်ယာန်အရှေ့ဥရောပနှင့် Sigismund ရဲ့မြေများနှစ်ဦးစလုံးခုခံကာကွယ်ဖို့သူ့ကိုအားပေးဖို့၎င်း၏ဖန်တီးသူ, သန့်ရှင်းသောရောမဧကရာဇ် Sigismund အားဖြင့်နဂါး (Dracule) ၏ crusading အမိန့်သို့ခွင့်ပြုခဲ့ အော်တိုမန် တပ်ဖွဲ့များနှင့်အခြားခြိမ်းခြောက်မှုများ။ အော်တိုမန်ကက်သလစ်နှင့်သောသူတို့နှင့်အတူပြိုင်ဘက်ဘာသာတရားကိုဆောင်ခဲ့အရှေ့ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဥရောပသို့တိုးချဲ့ပေးခဲ့သည် သြသဒေါက်ခရစ်ယာန်များသည် ယခင်ကဒေသအတွင်းလွှမ်းမိုးခဲ့သူ။ တစ်ဦးအတော်လေးသစ်ကိုပြည်နယ် - - နှင့်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်များ Wallachia နှစ်ဦးစလုံးကျော်ဟန်ဂေရီ၏နိုငျငံတျောနဲ့အော်တိုမန်ခေတ်အကြားတစ်ဦးအဟောင်းလောကပါဝါရုန်းကန်ရှိခဲ့သည်အဖြစ်သို့သော်ဘာသာရေးပဋိပက္ခ, overstated နိုင်ပါသည်။
Sigismund မကြာမီပိုင်းတွင်သူ့ကိုထောက်ပံ့ပြီးနောက် Vlad II ကိုဖွင့်တဲ့ပြိုင်ဘက်ရန်လှည့်ခဲ့ပေမယ့်သူကပြန် Vlad ထံသို့ လာ. 1436 ခုနှစ်တွင် Vlad II ကို, Wallachia ၏မင်းသားတစ်ပုံစံ, 'voivode' 'ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သို့သော် Vlad II ကိုထို့နောက်ဧကရာဇ်တွေနဲ့ဖဲ့နဲ့သူ့တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းဘွေဟာပြိုင်ဘက်အင်အားကြီးကြိုးစားဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်အော်တိုမန်ခေတ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဟန်ဂေရီပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ကြိုးစားမတိုင်မီ Vlad II ကို, ထို့နောက် Transylvania တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်အော်တိုမန်ခေတ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းသံသယကြီးပြင်းနှင့် Vlad ခေတ္တအော်တိုမန်ခေတ်ကဖြုတ်ချခြင်းနှင့်ထောင်ချခံခဲ့ရသည်။
သို့သော်သူကမကြာမီဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်, သူတိုင်းပြည် reconquered ။ အနာဂတ်မှာ Vlad III ကိုသူ့ဖခင်ကသူ့စကားလုံးမှစစ်မှန်တဲ့တည်းခိုကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးဓားစာခံအဖြစ်အော်တိုမန်တရားရုံး, Radu, သူ့ညီဖြစ်သူနှင့်အတူစေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ သူမနှင့် Vlad II ကိုဟန်ဂေရီနှင့်အော်တိုမန်ခေတ်အကြားသလိုလိုအဖြစ်သားနှစ်ယောက်ရိုးရှင်းစွာသံတမန်ရေးရာအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိုအပ်နေပြီလို့ Vlad III ကိုရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်ဘို့, သူအော်တိုမန်ယဉ်ကျေးမှုသို့ကိုယ်တော်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားနားလည်ပြီးဗတ္တိဇံနိုင်ခဲ့သည်။
Wallachian noblemen - - Vlad II ကိုနဲ့သူ့သားအကြီးဆုံးသူပုန် boyars အားဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည် 1447 ၌၎င်း, Vladislav II ကိုခေါ်တော်မူသစ်တစ်ခုပြိုင်ဘက် Transylvanian ၏လိုလားသူဟနျဂရေီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားဖြင့်ရာဇပလ္လင်ပေါ်တွင်တင်ခံခဲ့ရသည် Hunyadi တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ချိန်, Vlad III ကိုနှင့် Radu လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြသည်နှင့် Vlad ပိုပြီးမှတပါးတစ်ဦး boyars နှင့်အတူပဋိပက္ခမှဦးဆောင်ရသော voivode အဖြစ်မိမိအဘ၏အနေအထားတို့ကိုအမွေခံရသောရည်ရွယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး, သူ့ညီ, အော်တိုမန်ခေတ်နှင့်စတင်ကျောင်းအုပ်ကြီးသို့ပြန်သွား၏။ Wallachia အစား, ရှိသမျှယခင်လက်ရှိရဲ့သားသမီးများကအညီအမျှတောင်းဆိုနိုင်ကြောင်း, သူတို့ထဲကတစ်ခုအများအားဖြင့် boyars တစ်ကောင်စီတို့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်, ပလ္လင်တော်မှအမွေဥစ္စာကိုအဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောသည့်စနစ်ရှိခဲ့သည်။ လက်တွေ့တွင်ပြင်ပတွင်တပ်ဖွဲ့များ (အဓိကအားဖြင့်အော်တိုမန်ခေတ်နှင့်ဟန်ဂေရီ) စစ်ရေးအရပလ္လင်တော်မှဖော်ရွေယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေထောကျပံ့ပေးနိုငျတယျ။
ရရှိလာတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုများအကောင်းဆုံး Vlad III ကိုသုံးကြိမ်မြောက်အောင်အပါအဝင် 1418 ကနေ 1476 မှတကျိပ်တပါးသောသီးခြားမင်းအရာရှိ, ၏နှစ်ဆယ်ကိုးသီးခြားစိုးစံ, သတ်မှတ်သူကို Treptow ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ (Treptow, Vlad III ကို Dracula, p ။ 33) ဒါဟာ Vlad နှစ်ဦးစလုံးရဲရင့်လုပ်ရပ်များနှင့်လုံးလုံးလြားလြားကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှတဆင့်တစ်ဦးခိုင်ပြည်နယ်တည်ထောင်ရန်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးရာဇပလ္လင်ရှာသောအခါ, ဤပရမ်းပတာထံမှဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်ဒေသခံ boyar အုပ်စုတစ်စပ်ချုပ်ပညာ။ Vlad အော်တိုမန်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Wallachia ၏ရာဇပလ္လင်သိမ်းယူရန်မကြာသေးမီကရှုံးနိမ့်ဆန့်ကျင်အော်တိုမန်ဘာသာရေးစစျပှဲမြားနှငျ့ Hunyadi ၎င်း၏ဖမ်းယူ၏အားသာချက်ကိုယူသည့်အခါ 1448 ခုနှစ်ယာယီအောင်ပွဲရှိခဲ့သည်။ သို့သော် Vladislav II ကိုမကြာမီဘာသာရေးစစျပှဲမှပြန်လာသောနှင့် Vlad ထွက်ခိုင်းတယ်။
Vlad Vlad III ကိုအဖြစ်ရာဇပလ္လင်သိမ်းယူရန်အဘို့အပြန်နှင့်ထွက်, ကျနော်တို့အတိအကျဒီကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်အပေါ်နည်းနည်းသတင်းအချက်အလက်အများရှိသော်လည်း, Vlad မော်လ်ဒိုဗာရန်, Hunyadi အတူငြိမ်းချမ်းရေး, Transylvania မှအော်တိုမန်ခေတ်ထံမှထွက်သွား 1456. နီးပါးအခြားဆယ်စုနှစ်ယူ , Hunyadi ထံ၌အသစ်တဖန်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူထွက်ကျသွားစစ်တပ်အလုပ်အကိုင်နှင့် Vladislav II ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက် Wallachia ၏ 1456 အတွက်ကျူးကျော်, ဤသုံးပါးတို့အကြား။
တစ်ချိန်တည်း Hunyadi မှာတိုက်ဆိုင်, အနိစ္စရောက်လေ၏။
Vlad Wallachia ၏အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်မကွန်မြူနစ်အဖြစ် Impaler
voivode အဖြစ်တည်ထောင် Vlad ယခုသူ့အရင်များ၏ပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ခဲ့: ဟန်ဂေရီနှင့်အော်တိုမန်ခေတ်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့်လွတ်လပ်သောသူ့ကိုယ်သူစောင့်ရှောက်ရန်မည်သို့မည်ပုံ။ Vlad ရောနှောပြိုင်ဘက်များနှင့်မဟာမိတ်များ၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဒဏ်ခတ်ဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုသွေးထွက်သံယိုထုံးစံ၌အုပ်ချုပ်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ သူကတကယ်အမိန့်ကြောင့်လူလောင်းကြေးအပေါ်နှက်တိုင်တင်ခံရဖို့လုပ်ခဲ့တယ်, သူ၏ရက်စက်ယုတ်မာသူ့ကိုကမောက်ကမသူမည်သူမဆို, သူတို့ကမှလာဘယ်မှာနေပါစေအပေါ်ရက်စက်မှုခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်မမှားနိုင်တဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစဉ်အတွင်း ကွန်မြူနစ်ခေတ် ရိုမေးနီးယားအတွက်သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးဆိုရှယ်လစ်သူရဲကောင်းအဖြစ် Vlad ၏ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုဖျောပွထားသညျ့ Vlad အဆိုပါ boyar အထက်တန်းလွှာများ၏အလွန်အကျွံတိုက်ခိုက်ခဲ့သောစိတ်ကူးဝန်းကျင်အကြီးအကျယ်အာရုံစူးစိုက်, အရှင်သာမန်တောင်သူလယ်သမားများ၏အကျိုးအမြတ်။ 1462 ခုနှစ်တွင်ပလ္လင်တော်ထဲက Vlad ရဲ့ထွတ်၎င်းတို့၏အခွင့်ထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရှာကြံ boyars မှစွပ်စွဲခဲ့သည်။ တချို့ကရာဇဝင် Vlad bloodily သည်သူ၏အခြားကြောက်မက်ဖွယ်, ဂုဏ်သတင်းကိုမှဖြည့်စွက်, တန်ခိုးတော်ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်စုရုံးဖို့ Boyars မှတဆင့်သူ၏လမ်းထွင်းကြောင်းမှတ်တမ်းတင်။
Vlad ဖြည်းဖြည်းပျေါသစ်စာမဲ့ boyars ကျော်တန်ခိုးတော်အားကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြစဉ်သို့သော်, ဤယခုပြိုင်ဘက်များကဝိုင်းတစ် Fiction ပြည်နယ်ကြိုးစားခိုင်မာအောင်တစ်တဖြည်းဖြည်းကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ရပြီဟုယုံကြည်နှင့်အကြမ်းဖက်မှုများရုတ်တရက် orgy မနေသည် - ထိုပုံပြင်များအချို့ (တွေ့မြင်တောင်းဆိုအဖြစ် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) - တစ်ခုသို့မဟုတ် proto-ကွန်မြူနစ်များ၏လုပ်ရပ်များ။ အဆိုပါ boyars ၏လက်ရှိအင်အားကြီးသူကအနေအထားပြောင်းလဲသွားသူကိုဖွင့်အကြိုက်ဆုံးနှင့်ရန်သူများကိုခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နှစ်အတွင်းမဟုတ်တဦးတည်းရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ session တစ်ခုအတွက်တစ်ဦးတည်းကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
Vlad အဆိုပါ Impaler ရဲ့စစ်ပွဲများ
Vlad အဆိုပါ Wallachia အတွက်ဟနျဂရေီနှင့်အော်တိုမန်အကျိုးစီးပွားချိန်ခွင်လျှာ restore ရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်အလျင်အမြန်နှင့်အတူဝေါဟာရများထံသို့ရောက်လာကြ၏။
သို့သော်သူကမကြာမီပြိုင်ဘက် voivode ၎င်းတို့၏အထောက်အပံ့ကိုပြောင်းလဲသွားသူကိုဟန်ဂေရီကနေကွက်က assailed ခဲ့သည်။ စစ်ပွဲ Vlad နှစ်ဦးစလုံးနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုစစ်တိုက်ခြင်း, နှင့် epithet စတီဖင်မဟာဝင်ငွေမညျ့သူအရိယာတစ်ဦးမော်လ်ဒိုဗာထောက်ခံထားတဲ့ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်။ Wallachia, ဟန်ဂေရီနှင့် Transylvania အကြားအခြေအနေကငြိမ်းချမ်းရေးမှသည်ပဋိပက္ခသွား, နှစ်ပေါင်းများစွာမြန်နှင့် Vlad နဂိုအတိုင်းသည်သူ၏မြေများနှင့်ရာဇပလ္လင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
1460/1 ပတ်လည်ဟန်ဂေရီထံမှလွတ်လပ်ရေးလုံခြုံတော်မူပြီးမှ, Transylvania ကနေမြေယာပြန်လည်နှင့်သူ၏ပြိုင်ဘက်သောမင်းတို့ရှုံး, Vlad ယင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုချွတ်ချိုးဖဲ့ အော်တိုမန်အင်ပါယာ သည်, မိမိနှစ်စဉ်အခွန်ဆက်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်စစ်အဘို့ပြင်ဆင်မပြောဘဲနေကြ၏။ ဥရောပခရစ်ယာန်အစိတ်အပိုင်းများကိုအော်တိုမန်ခေတ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဘာသာရေးစစျပှဲဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျားခြင်း, Vlad လွတ်လပ်ရေးများအတွက်ရေရှည်အစီအစဉ်ကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြပေမည်, သူမဟုတ်မမှန်သူ့ရဲ့ခရစ်ယာန်ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်သည်သူ၏အောင်မြင်မှုအားဖြင့် buoyed ခဲ့ကြပေမည်, ဒါမှမဟုတ်သူကရိုးရိုးတစ်အခွင့်အရေးယူစီစဉ်ထားခဲ့ကြပေမည် တိုက်ခိုက်မှု Sultan အရှေ့ဖြစ်ခဲ့သည်နေစဉ်။
အော်တိုမန်ခေတ်နှင့်အတူစစ် Vlad အိမ်နီးချင်းရဲတိုက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းနှင့်အော်တိုမန်မြေများသို့လုယူတဲ့အခါမှာ 1461-2 ၏ဆောင်းရာသီအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာ Vlad ရဲ့အစ်ကို Radu တပ်ဆင်ရန်ရည်ရွယ်, 1462 ခုနှစ်တွင်မိမိတပ်နှင့်အတူကျူးကျော်အဆိုပါဆူလ်တန်ခဲ့ပါတယ်။ Radu အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်အင်ပါယာတှငျနထေိုငျခဲ့သဖြင့်, အော်တိုမန်ခေတ်မှ Pre-စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရ; သူတို့ဒေသကိုကျော်တိုက်ရိုက်အုပ်စိုးမှုကိုထူထောင်အပေါ်စီစဉ်ခဲ့ပါဘူး။ Vlad အဆိုပါ Sultan ကိုယ်တော်တိုင်ကြိုးစားသတ်ပစ်ရန်ရဲညဥ့်ဝင်ရောက်စီးနင်းမတိုင်မီပြန်အတင်းအဓမ္မပေမယ့်မခံခဲ့ရပါဘူး။ Vlad impaled လူများလယ်နှင့်အတူအော်တိုမန်ခေတ်ထိတ်လန်, ဒါပေမယ့် Vlad ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်နှင့်အ Radu ရာဇပလ္လင်ကိုယူ။
လိုလားသူကွန်မြူနစ်အချို့နှင့်လိုလားသူ Vlad သမိုင်းပညာရှင်အခိုင်အမာသကဲ့သို့ Vlad, အော်တိုမန်ခေတ်အနိုင်ယူပြီးတော့သူပုန် boyars တစ်ဦးပုန်ကန်ဖို့မကျခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား, Vlad ရဲ့နောက်လိုက်အချို့ကြောင့် Vlad ရဲ့စစ်တပ်ကကျူးကျော်အနိုင်ယူမဟုတ်နိုင်ကြောင်းသိသာဖွစျလာတဲ့အခါ Radu မှသူတို့ကိုယ်သူတို့ ingratiate မှအော်တိုမန်ခေတ်မှပြေး၏။ သူတို့သည်အစဉ်တကယ်ရည်ရွယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟန်ဂေရီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေ, Vlad ကူညီပေးဖို့သိပ်နောက်ကျရောက်လာပြီးအစား, သူတို့က, သူ့ကိုအဖမ်းခံရဟန်ဂေရီမှသူ့ကိုလွှဲပြောင်း, သူ့ကိုဖွင့်သော့ခတ်။
အဆိုပါ Wallachian ရာဇပလ္လင်ကိုပြန်သိမ်းယူသူကက်သလစ်ဘာသာကူးပြောင်းနှင့်ဝေးအျောသိုဒေါထံမှအခွအေနေပျေါတှငျ, အော်တိုမန်ခေတ်ကတစ်လာမည့်ကျူးကျော်တိုက်5- ထောင်ဒဏ်နှစ်ပြီးနောက် Vlad 1474 ခုနှစ်တွင်ဟန်ဂေရီတို့ကဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အဆိုပါမိုဒါဗွီယန်တို့အတွက်တိုက်ပွဲပြီးနောက်သူ 1476 ခုနှစ်တွင်သူ၏ရာဇပလ္လင်ပြန်လည်ပေမယ် Wallachia မှအော်တိုမန်အရေးဆိုသူနှင့်အတူစစ်တိုက်ရာတွင်မကြာမီပြီးနောက်သေဆုံးခဲ့ရသည်။
ဂုဏ်သတင်းနှင့် '' Dracula ''
အတော်များများကခေါင်းဆောင်များ လာ. ထိုသွားပြီ, ဒါပေမယ့် Vlad ဥရောပသမိုင်းတစ်ဦးလူသိများတဲ့ဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရှိဆဲပါပြီ။ ပိုပြီးအောင်အောင်မြင်မြင်သူနည်းတူအများကြီးခရစ်ယာန်တွေကိုစစ်တိုက်ကြ၏ဖြစ်သော်လည်းနှင့် - - အရှေ့ဥရောပအချို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်သူအော်တိုမန်ခေတ်တိုက်ခိုက်နေ၌သူ၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်သူရဲကောင်းသည်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာများစွာအတွက်သူသည်မိမိအရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာပြစ်ဒဏ်အဘို့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း, တစ်ရာ ရက်စက်မှုနှင့်လူ့အသက်ကိုသတ်သောသူ။ သူနေဆဲအလွန်အသက်ရှင်စဉ်အခါ Vlad အပေါ်နှုတ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်သူ၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လူ့အကျိုးစီးပွား၏ရလဒ်အဖြစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်သူ၏ထောင်ဒဏ်အပြစ်လွတ်စေ, ပြန့်ပွားခဲ့သည်။ Vlad အခြိနျမှာနေထိုင်ခဲ့ ပုံနှိပ်ထွန်းသစ်စခဲ့သည် နှင့် Vlad ပုံနှိပ်စာပေအတွက်ပထမဦးဆုံးအထိတ်လန့်ကိန်းဂဏန်းများတဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
မိမိအမကြာသေးမီကျော်ကြားမှုတာ Vlad ရဲ့ sobriquet '' Dracula '' ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဤသည်စာသား '' Dracule သားတော် '' ကိုဆိုလိုသည်ကို၎င်း, နဂါး၏အမိန့်သို့မိမိအဘ၏ entry ကိုတစ်ဦးကိုကိုးကားဖြစ်ပါသည်, Draco ထို့နောက်နဂါးအဓိပ်ပာယျ။ ဗြိတိသျှစာရေးဆရာသောအခါမူကား Bram Stoker သည်သူ၏သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဇာတ်ကောင် Dracula အမည်ရှိ , Vlad လူကြိုက်များကျော်ကြားမှု၏တစ်ဖွဲ့လုံးကမ္ဘာသစ်ဝင်ကြ၏။ ဤအတောအတွင်းရောမဖွံ့ဖြိုးဘာသာစကားနှင့် '' Dracule '' မာရ်နတ် '' ကိုဆိုလိုတာသို့ရောက်ကြ၏။ တစ်ခါတစ်ရံယူဆနေသည်အဖြစ် Vlad ထိုနောက်မှအမည်ရှိ, မဟုတ်ခဲ့ပေ။
Vlad အဆိုပါ Impaler အကြောင်းကိုပုံပြင်များ
ဒါဟာအချို့သတင်းရပ်ကွက်များကပိုပြီးအလေးအနက်ထားအခြားသူများထက်ယူရာ Vlad, ပတ်သက်. ပုံပြင်များအနည်းငယ်ဖော်ပြလျောက်ပတ်လိမ့်မည်။ တဦးတည်းအတွက်သူ Wallachia အပေါငျးတို့သညျဆငျးရဲနှင့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့သူတို့သောက် စား. , ပြီးတော့သူတို့ထဲကသူ့ကိုယ်သူတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဖို့တပြင်လုံးကိုအဆောက်အဦးချမီးရှို့အဖြစ်အားလုံးတံခါးသော့ခတ်, ပှဲကွီးလုစုဝေးလျက်ရှိသည်။ အခြားခုနှစ်တွင်သူကသူတို့ထုံးစံဖြစ်သကဲ့သို့, သူတို့ရဲ့ဦးထုပ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ငြင်းဆန်သောသူနိုင်ငံခြားသံတမန်များအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ဒါ Vlad မိမိတို့ခေါင်းပေါ်မှရိုက်သည့်ဦးထုပ်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့အကြောင်းကိုတိုင်ကြားမှပေါ်ထွန်း၏အမှားဖန်ဆင်းတော်မူသော Vlad ရဲ့အစိုးရတစ်ခုအဆင့်မြင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ဇာတ်လမ်းရှိပါတယ်, Vlad စွပ်စွဲသူမဆိုအငွေ့အထက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကြာကြာဆူးပေါ်နှက်တိုင်တင်ခဲ့ရသည်။ Vlad ပါမယ်အတူတကွခေါင်းဆောင်များ၏ရာပေါင်းများစွာစုဝေးသူတို့ကို impaling, ဒါမှမဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုများ impaling နှင့်ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများအတွက်ခံတပ်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အငယ်ကိုချွတ်ချီတက်အားဖြင့် boyars ကျော်ကသူ၏ထိန်းချုပ်မှုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။
Tarquin စော်ကားသော, ရောမဘာသာစကား Etruscan ရှငျဘုရငျ
အဆိုပါဂျက်တစ်ခုနိဒါန်း Ripper နက်နဲသောအရာ
Horatio Hornblower - အမိန့်သင်ကလုံးချင်းစာအုပ်များ Read သငျ့ပါဘယ်ဟာခုနှစ်တွင်?
ပါရှား၏ရှေးအစိုးရသောမင်းတို့ (မော်ဒန်အီရန်) ၏ Timeline ကို
ရှေးဟောငျးအီဂ Sumer ၏သမိုင်း
တော်လှန်ရေးကောင်စီ Apolinario Mabini
ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းသို့မဟုတ် Petrified: အ Difference ကဘာလဲ?
စက်တင်ဘာလ 11 သူ့အတွက်အမှတ်တရကျောက်တိုင် - အောကျမေ့၏ဗိသုကာ
ဓာတုသိုလှောင်အရောင်ကုဒ်များ (NFPA 704)
DD မူလစာမျက်နှာ၏ Incredible အင်အားကြီးနိုင်ငံများ
CSUDH GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စများ & အကြမ်းဖက်မှု
Nora Helmer ၏အက္ခရာ
ငါ acrylic သို့မဟုတ်ရေနံ Paint ကိုသုံးပါသငျ့သလော
ဖူး ( 'မ) နှင့်အနက်
(ချီးကျူး, ခုတ်တီးမှ) 'Applaudir' '၏တစ်ဦးကအဆင့်-by-step conjugation
Tao က: အဆိုပါလမ်းမရှိသောလမ်း
SUNY Geneseo GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ငါစကိတ်နေချိန်မှာမကောင်းပဲကြောက်တယ်ပေါ့ - ငါသည်အဘယ်သို့သင့်သလဲ
Informal ပြင်သစ် Negation: 'ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း' 'မရှိရင်' 'pas' '
အဆိုပါ Ford ကား Mustang Named ခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုနောက်ဝယ်ပုံပြင်
ဂျူးအမွေအနှစ်၏ပြတိုက်: အမီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့တစ်ဦးက Living သတိရအောက်မေ့